Ebe a na-achọ ezumike na "ezi ndụ" | Akụkọ Njem
Ebe acho izu ike na “ezi ndu” (I)
Carmen Guillen | | ulo, njem
Nchegbu kwa ụbọchị, ọsọ ọsọ, iri nri, wdg, na-emebi ọ bụghị naanị ahụ kamakwa ọnọdụ uche nke ndị mmadụ. Ọ bụ ya mere, mgbe ezumike dị mkpa ma ọ bụ akwa mmiri nke ụbọchị ezumike ga-abịarute, ndị mmadụ na-agakarị 'njem mgbapụ' nke na-eme ka ha kwụsị ịdị adị ha kwa ụbọchị. Enwere ndị nwere ike ịkwụ ụgwọ naanị otu izu ụka n'ime ime obodo ma ọ bụ n'ụsọ osimiri ma enwere ndị nwere ihu ọma karị, ndị nwere ike ịhọrọ ezumike dị jụụ karị, ogologo oge na ọtụtụ ntụrụndụ na ọdịmma gụnyere.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị ikpeazụ na ị nọ na ọchụchọ na njide nke ebe ị ga - ahapụ ihe ọ bụlaN'agbanyeghị oke ọnụ ahịa ha na ha na-enye gị ahụmịhe njem, nkwụsị na ezumike zuru oke maka ahụ na uche gị, ebe a ka anyị ewetara gị isiokwu abụọ dabara na ya. Echefula ha!
1 Shanti Maurice a Nira Resort, Mauritius
2 Ananda Na Himalayas Resort, India
3 Resort Fusion Maia, na Da Nang (Vietnam)
4 Resort Qualia, na Hamilton Island (Australia)
5 Metlọ nkwari akụ nke Como, na Miami
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ezigbo oge na ebe ezumike dị ụtọ yana ihe niile dị na mkpịsị aka gị, nhọrọ a bụ otu n'ime ihe kachasị mma. 'Santhi Maurice a Nira Resort' dị n'ime Agwaetiti Mauritius.
Lọ ọrụ a nwere ụlọ ndị mara mma na ụlọ ndị nwere ụdị nkọwa dị iche iche: igwe onyonyo ihu igwe dị larịị, ihe ọkpụkpọ DVD, ọdọ mmiri nkeonwe, igwe ezumike, wdg Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ hotelụ họtelụ efere mpaghara eji ngwaahịa Ọhụrụ site n'oké osimiri, site na ubi mkpụrụ osisi nke mgbagwoju anya ma ọ bụ site na ugbo ndị dị nso. Ha na-enye achicha achicha n'osimiri, menu 'wok' na nri puru iche maka ndi kwesiri igbakwunye nri siri ike.
Ọ bụrụ na ịhọrọ Shanti maurice, I kwesịkwara ịma na ị nwere ike na-eme dị iche iche na-eme dị ka ịgba ígwè, pilates, ịkụ azụ na 'okpokoro'. Ihe mgbagwoju ahu nwekwara spa na mgbatị ka ị nwee ike ịga n'ihu na-efe ahụ.
Otu abalị na ụlọ maka abụọ a oge na-ọnụ na ihe 450 euro ihe dị ka.
Resort Ananda Na Himalayas, India
Ebe a bụ Ezubere maka ihe omimi na ndị na-achọ udo, n'ihi na abụọ n'ime ọrụ dịgasị iche iche iji mepụta na ya bụ yoga na ntụgharị uche.
Ndị ọkachamara ahụ ike na ụlọ ọrụ Ananda ga-emepụta ahụmịhe dị ọcha nke ga-eweghachite uche gị, ahụ na mkpụrụ obi gị, site na ọgwụgwọ spa dị iche iche na mmemme ahụike, dị ka njikwa ibu, ndozi, Ayurvedic rejuvenation na njikwa nrụgide.
Ọ nwere nnukwu ụlọ sara mbara ma ọtụtụ nwere echiche mara mma...
El ego Otu abalị maka mmadụ abụọ, dị ugbu a 550 euro ihe dị ka.
Resort Fusion Maia, na Da Nang (Vietnam)
Resort Fia Maia dị na My Khe Beach mara mma na Da Nang, Vietnam. Akaụntụ ya na obodo ndi nwere kpakpando ndi nwere kpakpando onwe haHa dị ugbu a, saa mbara ma nwee patio nkeonwe nwere echiche dị egwu banyere ọdịda anyanwụ. Ime ụlọ ịwụ ahụ buru ibu na ọdọ mmiri ịsa ahụ na mmiri ozuzo dị iche iche.
Otu n'ime ike nke ebe a bụ ịrụ ụka adịghị ya gastronomy. Restaurantlọ oriri na ọ Yourụ .ụ gị ise na-eje ozi efere pan-Asia, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ọhụrụ na-enye azịza nke mmiri site na ọdọ mmiri na n’ime ime ụlọ ezumike tonic a na-enye nri dị mfe. A dịgasị iche iche na ị nwere ike ịhọrọ dị ka gị masịrị na culinary mmasị.
Ga-enwe ike ịnụ ụtọ opekempe nke ọgwụgwọ spa abụọ kwa ụbọchị ma soro na-eme ihe kwa ụbọchị dị ka ugboro ugboro Tai Chi klaasị nke a na-eme n’elu Ugwu Marble a ma ama na Vietnam.
Ebe zuru oke iji jikọta na okike ma zuru ike n'uche gị ụbọchị ole na ole.
El ego otu abalị maka mmadụ abụọ dị gburugburu 480 euro.
Resort Qualia, na Hamilton Island (Australia)
Ebe a bụ ezigbo ihe ịtụnanya maka uche. Ọ bụ a nnukwu okomoko ezumike ebe nkasi obi, ọdịdị na ọdịmma na-aga aka na-enye gị otu n'ime ahụmịhe kachasị mma, ekele ya mwekota n'etiti etiti okike.
Na a campo de goofu nke ga-atọ ndị hụrụ egwuregwu a ụtọ, ebe a nwere spa, yoga na ntụgharị uche na ọbụlagodi mmiri.
Ihe onyonyo a na-ekwu maka onwe ha…
Metlọ nkwari akụ nke Como, na Miami
A oge a hotel dị n'ihu oké osimiri na ngụkọta nke Roomslọ iri isii na asaa. Ndị ọbịa na-anọ na ya nwere ohere ịnwe mpaghara nzuzo nke akụkụ osimiri ya ma nwee ya ụlọ spa, site na nke echiche ndị ahụ dị egwu.
N'ime ụlọ oriri na ọ restaurantụ hisụ ya, anyị nwere ike ịchọta site na nri ndị a na-ahụkarị n'ógbè ahụ, gaa n'okirikiri mmiri, gụnyere nri ndị dị mma maka ndị anaghị eri anụ.
Su ego kwa abalị bụ n'etiti 250 na 350 euro, dị ka onyinye anyị na-achọta.
Ọ bụrụ na ị ka na-achọkwu, echefula echi isiokwu na-esote ya na ụlọ ezumike 5 ndị ​​ọzọ na ụlọ ezumike mara mma anyị na-ewetara gị ka ị nwee ike kwụpụ ma zuo ike. Ga-enwe nhọrọ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ebe acho izu ike na “ezi ndu” (I)
Niile ekpomeekpo na agba, nke a bụ ụtọ Peruvian gastronomy
Ihe isii ị kwesịrị ime na Morocco